देउवाले यस्तो आरोप लगाएपछि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले दिए मुखभरिको जवाफ, ओली दंग — Imandarmedia.com
देउवाले यस्तो आरोप लगाएपछि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले दिए मुखभरिको जवाफ, ओली दंग
गण्डकी । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री र सरकारलाई लगाएको आरोप सैह्य नहुने बताए । आइतबार पोखरामा पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै मन्त्री बाँस्कोटले भारतको नयाँ नक्सा बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नता रहेको भन्नेहरुले कसरी भयो भन्ने कुरा प्रमाणसहित पेश गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानीको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै देउवा नै गलत रहेको बताए ।
चुनावी हारजीतसँग राष्ट्रियता नजोडन उनले सुझाए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत रहेको कांग्रेसका सभापतिले यस्तो कुरा गर्नु गलत रहेको बताउँदै भने, ‘यदी उहाँले सत्य बताउनुभएको नै हो भने, उहाँको विषयमा पनि हामीले गम्भिर प्रश्न उठाउनुपर्ने भयो ।’ राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भिरतापूर्वक सरकार लागिरहेको बताउँदै उनले नाकाबन्दीको बेलामा एकशब्द बोल्न नसकेको कांग्रेस चुनावको समयमा ठूलो स्वर निकाल्दै चिच्याउन लागेको बताए ।
आगामी मंसीर १४ मा हुन गइरहेको कास्की २ को उपनिर्वाचनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न शनिबार पोखरा आएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले हालै बनाएको नयाँ राजनीतिक नक्सामा ‘कालापानी र लिपुलेक’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहमति राखिएको बताएका थिए । देउवाले आफूले महाकाली सन्धी गर्दा कालापानी, महाकाली पूर्वमा रहेको र अहिले भारतले ओलीकै सहमतिमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको’ आरोप लगाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना भारतले नयाँ नक्सा बनाउन नसक्ने दाबीसमेत गरेका थिए ।
सोही टिप्पणीको जवाफ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आइतबार पोखरामा नै मागेका हुन् । यसअघि नेपाल र भारत सीमा सम्बन्धका विषयमा वा कैयौँ विवादास्पद सन्धी सम्झौताका बेलामा देउवाले आत्मसमर्पण गरेको हुँदा अहिले त्यही सोचेर ओली सरकारलाई आरोप लगाएको बताए । बाँस्कोटाले टनकपुर सन्धी नबिर्सिएको बताउँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतले सच्याउनुपर्‍यो । त्यो सन्धीप्रति शेरबहादुर देउवाको दृष्टिकोण के छ ? जसलाई सर्वोच्च अदालतलेसमेत गलत छ भनेर भनेको छ ।’
त्यो सन्धी कसको पालामा भएको हो ? उनले प्रतिप्रश्न गरे । कालापानी र लिपुलेकको विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उनले बताए । ‘भारतको नयाँ नक्साप्रति नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्य छैन भनेर बोल्नुभएको छ,’ उनले भने । देउवाजीले ओलीको राष्ट्रवादी अडान, क्षमता र संघर्षको कुरामाथी प्रश्न उठाउनु आफैँमा लज्जास्पद रहेको भन्दै खेद प्रकट गरे ।
केन्द्रमा राष्ट्रियतको विषयमा सहमति गरेका देउवा पोखरा आएर बोल्नु भनेको चुनावमा भोट तान्नको लागि मात्र रहेको उनको भनाई थियो । यही विषयलाई चुनावी मसला बनाउनु साह्रै ‘झुर’ रहेको उनले बताए । बालुवाटार बैठकमा कुनै दलले असहमति नराखेको र देउवा स्वयंको पनि विमति नरहेको बाँस्कोटाले बताए ।
आफ्नो देशभक्तिको भावना र सार्वभौमिकता रक्षाको कुरलाई एक स्वर र एक मतले स्विकार गरेको बताउँदै उनले कूटनीतिक र राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सवैको सहमति रहेको बताए । ‘यस्ता आरोप लगाउने हो भने, कोशी, गण्डकीमा सम्झौता गर्दाखेरि ती सबैको एकमुष्ट जवाफ शेरबहादुर देउवाले दिनैपर्छ,’ उनले थपे । कान्तिपुर दैनिकबाट